China Fawless oil free matt အရည်အရည်ဖောင်ဒေးရှင်း SPF15 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ 20ml ကြာရှည်ခံမိတ်ကပ်အခြေခံအုတ်မြစ် | Jinfuya
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Matte finish၊ အကျယ်အ ၀ န်း၊ ချောမွေ့၊ ရေရှည်၊ ရေစိုခံ၊ ပေါ့ပါးသော၊ ရေနံပုံသေနည်း SP SPF15 ဖြင့်
အတွက်သင့်တော်သည် အရိပ် ၄၀ ကျော်သည်အများအားဖြင့်အသားအရေအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်
Net အကြောင်းအရာ 0.68 fl ။ oz ။ (၂၀ မီလီ)
function ကို မညီမညာဖြစ်နေသောအသားအရေကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးအသားအရေအမျိုးအစားတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအရည်ပုံသေနည်းဖြစ်သည်
အပြစ်ကင်းစင်သည့်အုတ်မြစ်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးမျက်နှာကိုရှေ့သို့တင်ရန်သင်၏လျှို့ဝှက်လက်နက်ဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝဖုံးအုပ်ထားသောအုတ်မြစ်များ၏သန့်ရှင်းသောမြက်ခင်းလွင်သောဤပုံရိပ်အရည်သည်ပုံသဏ္skinာန်သည်အရေပြားပေါ်တွင်အိပ်မက်ကဲ့သို့စွဲမြဲနေပြီးသင့်နှလုံးသားအလိုရှိရာကိုကြည့်ရှုရန်စင်မြင့်ကိုခင်းပေးသည်။ sheerer လွှမ်းခြုံမှုအတွက်သင်၏နေ့စဉ် moisturizer ဖြင့်ရောနှောပါ။ ခြောက်သွေ့သောအလင်းရောင်အတွက်မျက်နှာအသားအရေကိုစိုပြေစေပြီးရောမွှေပါ။ အနည်းငယ်မျှသောချဉ်းကပ်မှုအတွက်အလင်းအမှုန့်အပလီကေးရှင်းဖြင့်သတ်မှတ်ပါသို့မဟုတ်အနီရောင်နှုတ်ခမ်း၊
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည်အလှအပ၏အကောင်းဆုံးကိုမျက်နှာတိုင်းမှရရှိစေပါသည်။ သင်၏မူရင်းသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားသင့်ကိုထူးခြားစေသည့်အရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှုတ်သွင်းပါသည်။ အစောပိုင်းစူးစမ်းရှာဖွေသူမှသည်စွဲလမ်းနေသောအလှအပဖြစ်သော junkie-glam သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းသောမျက်နှာ၊ အနိမ့်ကျဆုံး၊ အမြင့်မားဆုံးနှင့်အကြားရှုထောင့်တိုင်းအထိ - ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်လုံး၊ နှုတ်နှင့်မျက်နှာတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်သက်သတ်လွတ်နှင့်ရက်စက်မှုကင်းမဲ့သူဖြစ်ရန်ဂုဏ်ယူသည်။
၁။ ပေါ့ပါးပြီးအပြည့်အဝဖုံးအုပ်ထားသောနူးညံ့သည့်ဖော်မြူလာသည်တစ်နေ့လုံးကြာရှည်ခံသည့်လှပသော Semi-Matte finish ကိုရရှိရန်အတွက်အသားအရေအတွင်းသို့ပေါင်းစပ်ပေးသည်။
၂။ အရည်ရွှမ်းသောဖော်မြူလာသည် ပို၍ တောက်ပသောအသားအရေများအတွက်မညီမညာဖြစ်နေသောအသားအရေနှင့်အသံများကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါသည်။SPF-15 ကို အသုံးပြု၍ သင့်အသားအရေအားနေရောင်ခြည်ဒဏ်မှကာကွယ်ပေးသည်။
၃။ အမြတ်အစွန်းကင်းသော၊ သက်သတ်လွတ်နှင့် ၁၀၀% Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban နှင့် Hydroquinone မှအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ အပြည့်အဝဖုံးအုပ်ထားသောအရည်ဖုံးထားသော 6ml matte finish 16 နာရီကြာမြင့်သောမိတ်ကပ်ဖုံးအုပ်မှုသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပါသည်
နောက်တစ်ခု: လက်လီ Silky Liquid Foundation 8 အရောင်သည်အလေးချိန်မရှိသော ၃၀ မီလီမီတာနှင့်သဘာဝ creamy texture နှင့် Moisturizing Formula တို့ဖြစ်သည်
မိတ်ကပ် Matte ဖောင်ဒေးရှင်း
လက်လီပိုးကူးစက်ဖောင်ဒေးရှင်းလက်လီအရောင်း ၈ ခု Weig ...
Clear Lip Gloss စိုထိုင်းသော Vegan Lip Care Mak ...
Custom Logo Matte lipgloss တာရှည်ခံသော colo 40 ...
Private Label သတ္တုစပ် Shimmer Lipgloss Vegan C ...
Private Label မိတ်ကပ်ရေစိုခံသတ္တုတွင်း ...